पत्रकार गौतम सहित दुई जना साहित्यकार र दश जना बिद्यार्थी पुरस्कृत | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार पत्रकार गौतम सहित दुई जना साहित्यकार र दश जना बिद्यार्थी पुरस्कृत
२०७८, २२ मंसिर बुधबार २०:०८
धनेश्वरी–तारानाथ स्मृति कोषले बुधबार पुलाचौरमा म्याग्दीका एक जना पत्रकार, दुई जना साहित्यकार र दश जना बिद्यार्थीलाई पुरस्कृत गरेको छ । धनेश्वरी–तारानाथ रेग्मी स्मृति प्रतिष्ठानले गत बर्ष शिक्षा, पत्रकारिता, साहित्य र संगित बिधालाई समेटेर रु. १५ लाख रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गरेको थियो ।
कोषले पहिलोपटक नेपाल पत्रकार महासंघ म्याग्दी शाखाका सचिब सन्तोष गौतम सहित दुई जना साहित्यकार र दश जना बिद्यार्थीलाई पुरस्कृत गरेको हो । पत्रकारिता, शिक्षा र साहित्य बिधामा रामप्रसाद सुबेदी, शिक्षा र साहित्य बिधामा धु्रबलाल शर्मालाई रु. दश÷दश हजार सहित पुरस्कृत गरिएको थियो । पुरस्कृत पत्रकार गौतम बेनीबाट प्रकाशन हुने रिखार दैनिक पत्रिका र धौलागिरी खबर अनलाइनका प्रकाशक हुनुहुन्छ ।
नेपाली काँग्रेस म्याग्दीका नेता माधवप्रसाद रेग्मी, उहाँका दाजुहरु मुकुन्द, नारायण, स्वर्गीय मोहन र रामप्रसाद रेग्मी लगायत परिवारका सदस्यहरुले कोष स्थापना गर्नुभएको थियो । पुरस्कार बितरण समारोहमा कोषले जनकल्याण माबिको अक्षयकोषका लागि रु. एक लाख ५५ हजार प्रदान गरेको थियो । स्वर्गीय तारानाथ रेग्मीको स्मृतिग्रन्थको बिमोचन गरिएको थियो ।
सो अवसरमा मदन पुरस्कार बिजेता बानियालाई अभिनन्दन समेत गरिएको थियो ।जनकल्याण मावि स्थापना कालमा रेग्मीको घरबाट सञ्चालन भएको थियो । काठमाडौबाट आउनुभएका शिक्षकलाई उहाँकी श्रीमतिले खाना पकाएर खुवाउनु हुन्थ्यो ।
त्यही कारण पुलाचौर र आसपासको क्षेत्रमा शैक्षिक बिकासमा रेग्मी परिवारको महत्वपूर्ण योगदान भएको मानिन्छ।
Previous articleअनेरास्ववियु म्याग्दी द्वारा शैक्षिक सामाग्री बितरण
Next articleजेसीज कप: डिफेन्डिङ च्याम्पियन न्यू वेष्ट पोइन्ट सहित ५ विद्यालय विजय